War-murtiyeed Lifaaq Wata Oo Uu Isku Barraxay Agaasimihii Waxbarashada Ee Wasiir Cabdillaahi-dheere Uu shaqadii Wasaaradda Ka Joojiyey] | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM War-murtiyeed Lifaaq Wata Oo Uu Isku Barraxay Agaasimihii Waxbarashada Ee Wasiir Cabdillaahi-dheere Uu shaqadii Wasaaradda Ka Joojiyey]
Akhri: Qoraal Dheer Oo Agaasimaha guud ee wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta Sare uu Iskaga Difaacay Eedaymaha Uu Wasiirkiisu U Soo Jeediyey
Hargeysa (Hubaal)- Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee JSL Md. Abiib Axmed Cali oo horraantii toddobaadkan uu wasiirka wasaaraddaasi Md. Cabdillaahi Ibraahim Habanne ka joojiyey shaqadii isla markaana ku xidhiidhiyey falal lidi ku ah wada shaqayntii u dhaxaysay labadooda ayaa markii u horreysay ka hadlay sida uu u arko shaqo ka joojintaas iyo eedaha uu wasiirkiisu u soo jeediyey. Agaasime Abiib Axmed Cali oo war murtiyeed dheer oo dhawr bog ka kooban xalay ka soo saaray magaaladda Hargeysa isla markaana uu wargeyska HUBAAL helay nuqul kamid ah ayaa uu kaga jawaabay fal uu sheegay inaanu sharciga waafaqsanayn oo lagu uu wasiirka wasaaradda waxbarashadu kula kacay xasaannadiisa. War murtiyeedkaasi oo dhamaystiranina waxaa uu u qornaa sidan: “Waxaan War saxaafadeedkan u qabtay maanta [shalay] oo bishu tahay Arbaca 10 August 2016 in aan ka jawaabo fal aan sharciga iyo awoodaha wasiirka toona ahayn, oo uu ku talaabsaday wasiirka Wasaarada waxbarshada iyo tacliinta sare Mudane Cabdillahi Ibrahim Habane. Asalkana Diinta islaamku waxay u timi in ay ilaaliso : Diinta, Nafta, Maalka, Caqliga, iyo Cirdiga(Sharfta) banii aadamka. Sidaa daraadeed, ilaalinta sharafta qofka banii aadamka ahi sharftiisa iyo karaamadiisu waa waajib qofwalba saaran. Cidii ku xad gudubta sharfta qofkale ama xuquuqahaa kale waxay diinteena Islaamku xaq u siisay in uu is difaaca ama ka goosto inta lagu sameeyey in leeg. Hadii uu iska saamaxana abaal marin Eebe ka siiyo. Waxanu Ilaahay SWT qoraankiisa ku yidhi: Sura Shura(Juz25,40): Xumaan Abaalkeeduna waa ku abaal marin mid la mid ah. Ruuxii iska cafiyana oo wanaajiyana Ajri iyo Abaalmarin ayuu Eebaa siin. Illaahayna ma jicla daalimiinta. Suratu Nakhal: (Juz14, 126) Hadaad aad wax ciqaabaysaan u ciqaaba inta laydin Ciqaabay, hadaad samirtaana isagaa u khayr toon kuwa samra. Suratu Isra: Sidaa daaraadeed waxay shareecada islaamka xaq ii siinaysaa inaan difaaco karaadmadayda iyo sharaftayda oo intii la igu sameeyey in leeg ka jaro qofka. Hadaba anoo raacaya ta ka khary badan ee saamaxaada waxaanse xaq u leeyahay inaan saxo ta aniga la iga sheegay ee beenta ah oo ka sheego sida runtu tahay. waxaanan halkan kaga jawaabayaa oo kaliya waxii wasiirku lacata badan ku bixiyey ee eedaymo ahaa ee isaga iyo Afhayeenkiisa yar ee daydaynimada reeraysan ku curyaamay saxaafada ku baahiyeen. Haddaba inta aana ka jawaabin eedaymaha waxaan jecel ahay inaan dib u jaleecno si koobana eedaymaha wasiirka:
kuwaas oo ay ka mid yihiin ficiladan hoos ku qoran.
Wasiirku waxa uu soo adeegsaday Askar Police ah oo uu keenay Wasaaradii Waxbarashada. Kuwaas oo iga hor joogsaday inaan soo galo W.W.&.T.Sare. Askartan oo aan haysan wax warqad ah oo faraysa amarkan. waxana markii aan su’aalay sabata ay ii hor joogsadeed ii dhiibeen warqad buqshad ah oo magacaygu ku qoran yahay, Waxayna igu yidhaaheen waxay ka timi madaxtooyada ee oradoo la xidhiidh. “Anaga amar ayuunbaa lana soo siiyey” ayuu igu yidhi askarigii. Markii aan furay warqadahana wax warqad ah oo madaxtooyada ka timi kuma arag, hase ahaatee waxaan ku arkay warqada wasiirku ii soo qoray oo ay ku lifaaqan yihiin nuqulo warqado aan aniga iyo wasaaradu isku diray.
Wasiirka iyo Afhayeenkiisu waxay warsaxaafadeeda ahaan ugu faafiyeen Saxaafada kala duwan iyo Baraba wararka ee “Guri Caareedyada Caalamiga ah” (International news websites) warqad aniga iyo hay’adaha dawliga qaarkood si gaar ah(Private) ugu socotay oo nuxurada qoraaladana warar aan sal iyo raad lahayn ka buuxdo, si ka baxsan sharciga, hab dhaqanka, anshaxa suuban, islaanimada iyo nidaamka wada shaqaynta xafiisyada dawladda loogu faafiyey.
Adiga oo hay’adaha Ajaanibka ah u gudbiya waxaan wasaaradda u gaar ah. una sheega falalka sharcidarada ah iyo agendayaal qarsoon. eeg Emailka 11/5/2016. iyo in ay wado wasaaradu argagixiso.
Adoo ka hadla isku bedelka shaqaalaha een sameeyo wasiir ahaan.
Haddaba mudanayaa iyo marwooyinba, waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo falalka wasiirku uu sameeyey, isna waydiino maxaa sharci ah maxaan ahayn. Isla markaana kaga jawaabno eedaha kor ku xusan ee la igu eedeeyey.
Wasiirku askarta uu dhigay wasaarada ee uu yidhi ka joojiya Agaasimaha Guud inuu soo galo ma sharcibaa? mise waa sharci darro?.
Warqadaha agaasime guud loo dirayo iyo hay’adaha dawladda goormay wasiirka sharci u noqotay in saxaafada loo qaybiyo. Habkani ma nidaamkii dawladeedba mise waa waxyaabaha ka baxsan anshaxa maamulka hay’adaha dawladda?
Wasiirka iyo Agaasimaha Maamulka waxa ay jabsadeen Xafiiskii agaasimaha Guud. Waxa uu u hanjabay (Abused) xoghayntaydii oo uu qasab kaga qaatay furihii Markaasuu qqufulkiina ka badeshay. Arintaasi Madaxwaynaha iyo Dawladda iyo Shacabkaba waxaan leeyahay ma sharcibaa in xafiis aanad lahayn jabsataa? Miyaanay Tuugo ahayn?
Dugsigaa waan tagay waana la dhisay. Sabata uu iigu eedaynayo inaanan tagina waxuu og yahay inaan diiday lacagta uu qandaraaska ku bixiyey. Waxaana uu ku qandaraasay laba fasal iyo Store yar lacag dhan $71,000. Illaahaybaan idinku dhaarshee ma qiimahaasa ku baxa laba fasal iyo store yar oo dhan 22m +dayactir daaqado. waxaan idiin sheegayaa fasalada standardka ah ee Hay’adaha wax noo dhisaa waa $8000-$10,000. Hadaba marka hay’adii lacagta haysatay intaa qandraas ku bixiso maxaa budgetka yar ee dawlada uga dhigay farajiin. mise waa dhaka kale oo waa loo dhuljeefeeyey.
Horta ilaahaybaa ina dilayee kama hor iman tababarka macalinka. Runtii waa mid aan u riyaaqsanaa laakiin waxaa diiday habka loo maamulayey oo ahaa mid aan daacad laga ahayn ee “Far Hunguri”loo samaystay. Waxaanan ku taliyey in lagu qabto Jaamacadaha dalka oo leh Collegeyada education iyo agab wanaagsan. kuwaas oo runtii wax ka tari jirey dakhliga Jaamacadaha iyo machadyada macalimiinta lagu tababaro. waxayna ahayd dakhliga kaliya ee soo gala jaamacadahaa, waayo ardayda badankeedu uma gasho xirfad ahaan macalinimada siday digriiyada kale. Waxaana kabi jiray tababaradana macalimiinta. Waxaanad u samaysatay Xisaab baaneed gaar ah “Bank Account”. kaas oo aanad la wadaagin Agaasimaha Guud ee ka masuulka ah kharashaadka wasaaradda. Halkaas oo ay ku soo dhacdo Fiidii Macalimiinta ee jaamacaduhu qaadan jireen. ilaa imikana lacagta fiida cida qaadata aan la garanayn.
Iyadoo oo xanaaqii warbixinta tababarka macalimiinta ay kugu jirto ayaa hadana waxuu Agaasimaha Manaahijtu kuug daray warbixintii buugta la qorayey. Markaasaa wax yaable oo wasaarada fajiciso ku noqday laga waramay. Qandaraas Qof loogu xidhay buugtii dalkoo dhan. Dadka buugta qorayey oon ahayn dad u qalma, Agab iyo buug laga dheego oon la hayn IWM. Ayada oo aan wax talo ah laga waydiin madaxda wasaaradda. Agaasimayaasha Guud, Wasiiru dawlaha iyo daneeyayaal kaleba. Markaan wax ka waydiiyey Agaasimihii Manaahijta goorta uu wasaaradda u keenayo si loo hubiyo buugta la qoray wuu diiday inuu sifiican ugaga jawaabo. Waxaan ku idhi “ Miyaanay haboonayn in ubadkeenu buugaagta (Text books) maadooyinka kala duwan ee loo dhigi doonaa in wasaarada khabiiradeeda iyo dadka kale ee cilmiga u lahaa inay inala eegaan si aynu u helo buug tayo badan?, ka dibna intaad aad u xanaaqday ayaad shirkii xidhay oo xataa u diiday wasiiru dawoluhu isku dayay inuu ku dajo, hase yeeshee waad iska gundhisay oo diiday, sidaasaanu ku xidhmay shirkii. maalintii kuxigtay 31 July 2016 waxaan warqad u diray Agaasimaha Manaahijta oo ku idhi fadlan buugta oo softa ah iyo hal copy oo sample ah keen wasaaradda si loo eego inta aanay daabacaad galin. Waxuuse ii soo diray jawaabta tixraaceedu tahay. Inamadii gudoomiyayaasha buugtana oo aan ugu yeedhay kulan wasaaradda ahna waxuu ku amray in ayan iman. Waxaan rumaysnaha inuu manhajka dalku yahay “ Masiir Umadeed” kaas oo u baahan in aad looga baaraa dego een u baahnayn in laba bilood lagu sameeyo “manhaj qarafaa dhug ah” si qandaraaska macaashkiisa uun loo qaato, aseen dan looga galin ubadka reer somaliland waxay baranayaan.
Waxa uu yidhi wasiirku” Adiga oo hay’adaha Ajaanibka ah u gudbiya waxaan wasaaradda u gaar ah. una sheega falalka sharcidarada ah iyo agendayaal qarsoon. eeg Emailka 11/5/2016.” Waxan ka xumahay inaanu wasiirku sifiican u akhriyin nuqulka emailka uu iigu soo lifaaqay oo si cad u tusinaysa taariikhda 11/05/2016 waqtiga 07:45PM in Wasiirku xigeenkiisu ii soo qoray email uu iigu hanjabayo oo uu tusayo ama siiyay CC dadkale oo ajinabi ah inuu booska yahay. Waan ka xumaaday emailkaa waxaanan gujiyey reply markaasaan ku celiyey jawaab emailkaa at 08:23 PM. Haddaba ma anaa bilaabay mise wasiirkiisa? Anigu runtii daacad baan arrinta ka ahaa waxaan ogaaday markaan diray inay ccyo badani la socdeen, waana intii uu wasiir garas ku soo lifaaqay.(Fadlan eeg lifaaqa emailka”. Su’aasha ah waxaad ku sheegtay argagixiso wasaarada, fadlan wasiir halkay kaga taalaa emailka aad ka hadashay. Waxaa laga hadlayaa “Baadhitaan iyo lafa guris waxbarashada iyo himiladiisa” ma waxaad u qaadatay ESA/ESSP inay tahay argagixiso? Maan fahmin meesha aad erayadan ka keentay, malaa cadhadaa kuula gashay ee sidaa maad moodayn. Gaba gabadii wasiirku waxa uu yidhi “ Laga bilaabo saacada aad hesho warqadan waxaan kaa joojiyey xilkii Agaasime Guudnimo ee aad wasaaradda u haysay waxaana kaa reeban in aad xarunta wasaaradda iyo xafiiska aad ku shaqaynaysayba aad soo gasho laguguna arko amar la’aan”. Su’aasha meesha taalaa waxaa weeye ma wasiirkaa xilka Agaasime Guudnimo ii dhiibay mise Madaxwaynaha J.S.L?. Wasaaraduna ma aqalkiisiibaa mise waa Makhaayad uu leeyahay? Cajiib!
Wax badan oo naga qaldan u bandhigi maayo sidii wasiiirku saxaafada. Waxaanu ku xalilan wasaarada dhexdeeda . Haday naga maaran siin waydana cida nasoo magacowday ayaanu u gudbin si ay noogu gar naqdo.
AGAASIMAHA GUUD EE WASAARADA WAXBARASHADA
ABIIB AXMED CALI